Akukho lutho ngaphandle kweKnutut
Njengoba simatasa neqiniso, akudingeki sinikeze amandla namandla ethu emangeni.
Izindatshana ezifundwe kakhulu ngosuku ngeSonto, Juni 28, 2020. ISITHOMBE: Usuku.
Le mpikiswano izodala kuphela ukudideka okuningi kanye nemaki yemibuzo kunamaphuzu okubabiza. Esikhundleni salokho, kufanele sibeke amandla ethu namandla ethu ekunikezeni umhlaba uJesu Kristu.
Imibhalo yezimpikiswano ku-Knutby
Iphephandaba lansuku zonke lamaChristian Day liqukethe izindatshana eziningi kanye nemibhalo yokuphikisana ngokwenzeka kuKnutby kanye nesizathu salokhu.
Izindatshana ezifundwe kakhulu "namuhla" yizindatshana zokuxoxisana ngeKnututby ezibhalwe ngababhali abahlukahlukene.
Kepha kungani umuntu kufanele afake amandla namandla abo kulokhu? Le mpikiswano izodala kuphela ukudideka okuningi kanye nemaki yemibuzo kunamaphuzu okubabiza.
Esikhundleni salokho, kufanele sibeke amandla ethu namandla ethu ekunikezeni umhlaba uJesu Kristu.
Sizoguga kuphela futhi akukho maki yemibuzo ezoqondiswa uma simatasa nalokho esingabizwa ngakho.
Vecka 25, tisdag 22 juni 2021 kl. 13:07